Hudiksvall waxeey ku ag taal jidka E4 80 km waxeey dhanka koofureed kaga taal Sundsvall, waxeeyna 130 km dhinaca waqooyi kaga taal Gävle. Halkaan waxaad kula kulmeeysaa dad qalbi furan, waxaa kaloo meeshaan yaal nolol dhaqameed xayi ah iyadoo la arkayo waxyaabo ka yimid waqtiyadii hore oo ku dhex milyay waxyaabaha casrigaan la joogo. Hudiksvall waxeey goob farasmagaalaa u tahay degmada Hudiksvall laakiin waxaa jira xaafado kaloo sida Iggesund, Delsbo Forsa iyo kuwo kale. Xaafadaha isku dhowdhowna waxaad ka heleysaa dukaamo, bangiyo, rugag caafimaad, dhakhtarka ilkaha iyo waxyaabo la halmaala.
Hudiksvall waa magaalo xeebed qurux badan waxaana la aasaasay 1582. Ilaha dhaqaale ee magaalada waxeey kala ahaayen kaluumeysi, badmaaxnimo, farshaxan iyo ganacsi. Ka ganacsiga kaluunka waxuu sanado badan gudahood ahaay meel uu dakhli muhiim ah kasoo galo. Meelaha kaluunka lagu iibiyo ama meelaha ka agdhow balliyada waxaad ku arkeeysaa wixii kasoo haray waqtigaas.
Degmada gudaheed waxaa ka jira shirkada guryaha ee degmada och shirkado kaloo guryaha kireeya oo gaar loo leeyahay. Marabtaa inaad gashid safka loogu jiroguryaha ama inaad heshid warbixin ku saabsan guryaha bannaan waxaaf gashaa waxaad ka fiirisaa bogaggooda internetka ah.
Ama waxaad gashaa bogga Blocket si aad u ogaatid haddii eey jiraan guryo kaloo degmada ka bannaan.
Degmada waxaa ka jira saf loo istaago dhulalka bannaan. Dhulalkaas waxaa saf u gali qof kasta oo 18 sano buuxiyay isla markaana raba inuu ka dhisto guri uu dego. Qoys kasta waxeey dalban karaan hal dalab. Faafaahin dheeraada ka akhriso degmada boggeeda internetka ah - safafka dhulka ama waxaad gashaa bogga dhis.
Hudiksvall waxaad ku arkeysaa dhaqamo kala duwan och luqado kala duwan. Luqadaha ugu waaweyn waa carabi, tigree, daari, faarsi. Saawixili, tamil iyo isbaanisha waa luqadao kaloo ka jira degmada.
Degmada Hudiksvall waxey leedahay nolol jaaliyadeed qani ah. Jaaliyada waxeey kuu hayaan fursado kala duwan oo aad ku sameyn kartid waxyaabo kala duwan. Ma rabtaa in talo lagaa siiyo waxa aad sameyn kartid mark aad fasaxa tahay? Baraaktiik? Shaqada waqtiyada fasaxa? ma u baahan tahay caawimaad? waxaad kusoo dhawaataa hudiksvall.se/dhalinyaro! faafaahin dheeraada ka akhriso Arag-sameey.
La xiriir xafiiska warbixinta dalxiiska ee Hudiksvall ama booqo bogaga internetka ee Hälsinglands matxafka, Hälsinglands iyo Glysisvallen AB si aad u heshid warbixin dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha aad sameyn kartid.
Warbixin ku saabsan shirkadaha degmada waxaad ka heleysaa degmada boggeeda internetka.
Faafaahin dheeraada oo ku saabsan jaaliyadaha waxaad ka heleysaa Hudiksvall.se.
Farasmagaalaha waa meesha eey dukaamada oo dhan ku yaallaan. Waxaa jira dukaamo kala duwan iyo bangiyo, farmashiiye, shaleemo, maktabad iyo dukaamo gada ganacsiga maalinlaha ah. Waxaa kaloo jira dukaamo dhowr ah oo gada cunto iyo xawaash laga keenay bariga dhexe iyo qaarada Aasiya.
Waxaa jira mowlac lagu dukado oo ku yaal xaafada ku taal dhinaca galbeed.
Waxaad xur u tahay inaad si bilaash ah u isticmaashid kumanaan buugag, buugag dhageysi, joornaalo, iyo waxyaabo kaloo kuwaaso oo kale oo aad ka heli kartid sideedeena maktabo.
Bartamaha Huduksvall waxaa ku yaal xafiiska shaqada waxaa kaloo ku yaal xafiiska ceymiska, xafiiska amuuraha howlgabayaasha iyo xafiiska cashuuraha, kulligoodka hal goob ayeey wada fadhiyaan.
Dukaamada waxaad ka heleysaa bartamaha magaalada. Shoob senteruumka Guldsmeden ama suuqa Fyren. Waxaad booqataa Centrumhandel si aad u heshid warbixin ku saabsan dukaamada ku yaal Hudiksvall. Dadka ka hela waxyaabaha qarniga ah ha booqdaano Butik 66 (Dukaan 66).
Waxaa ku yaal dukaamada huudheeyda ah oo gada alaabaha guryaha, dhar, qalabyo kala duwan. Erikshjälpen, laan qeybta cas waxeey ku yaallaan Hudiksvall iyo Forsa. esursen, Café 7:an, Biståndscenter waxeey ku yaallaan Håstaholmen; Dakapo oo ku yaal Forsa iyo Säcken oo ku yaal Delsbo. Waxyaabaha huudheeyda ah waxaa online uga gadan kartaa Blocket.
Degmada Hudiksvall waxaa ku yaal 30 dugsiyada xanaanada Caruurta ah, oo saddax xaafado loo kala qeybiyay; koofur, waqooyi iyo galbeed. Carruurta u baahan kaalmada gaarka ah waxaa la siinayaa caawimaad u dhigmata baahida ey qabaan.
Booqo bogga internetka ee degmada si aad u heshid Faafaahin dheeraada oo ku saabsan Dugsiyada xanaanada carruurta & guryaha xanaanada carruurta.
Degmada Hudiksvall waxaa ku yaal 17 dugsihoose dhexe oo eey dhigtaan 3500 oo arday, oo saddax xaafado loo kala qeybiyay; koofur, waqooyi iyo galbeed.
Iskoollada waxeey leeyihiin jawi waxa lagu garto eey tahay isku qalbi furnaan iyo is dhexgal waxeeyna kuu hayaan waxbarasho kala duwan takhasusyo kala duwanna leh. Booqo degmada boggeeda interntka si aad u heshid faafaahin dheeri ah.
Bromangymnasiet waxuu kuu hayaa 14 barnaamijyo dugsiga sare ah kuwaasoo 9 kamid ah yihiin kuwo aad ugu sii gudbi karto machad xirfadeedyo halka 6 kalana eey kuu diyaarinayaan waxbarasho jaamacadeed. Barnaamijyada laga barto kaamacada waxaad ka heleysaa halkaan. degmada waxeey kalo leedahay dugsiga sare ee Glada Hudik-gymnasiet iyo dugsi hoose dhexe oo ah kuwa gaarka loo leeyahay.
Waxbarashada dadka waweyn ee Hudiksvall waxeey kuu heysaa waxbarashada lärvux, waa xarun barid iyo horumarineed- Cul, machad xirfadeed iyo sfi (luqada iswiidhishka ee ajnabiga). Waxbarashada dadka waaweyn boggooda internetka ka akhriso wixii faafaahin dheeri ah.
Hudiksvall waxaa ku yaal machad jaamacadeed. Xarunta waxbarida iyo hormarida waxaad ku baran kartaa barnaamij waxbarashadeedyada sida masaafada ah loo akhrisan karo oo eey jaamacadaha soo galiyaan. Inaad waxbarasho heer jaamacadeed ah ku akhrisatid xarunta waxbarida iyo hormarida waxeey ka dhigantahay inaad ka diiwaan gashantahay jaamcad sida machad jaamacadeedka Gävle laakiin aad waxbarashadaada ku dhigatid Xarunta waxbarida iyo hormarida.
Xafiiska gobolka waxuu wadaa machadka dadka waaweyn ee degmada, machadka dadka waaweyn ee degmada ee Forsa ee ku yaal Forsa.
Riix halkaan si aad u heshid warbixin dheraad ah oo ku saabsan sida wax looga barto wadanka Iswiidhan ama sida loo doorto barnaamij waxbarashadeed ama jaamacad waxaa ka fiirisaa University admissions.
Degmada waxaa ku yaal rugag caafimaad oo badan sida Hudiksvall, Iggesund iyo Delsbo. Waxaa maamulkooda gacanta ku haya gobolka laakiin waxaa iyagana jira kuwo gaar looleeyahay. Degmada waxaa ku yaal mid ka mid ah labada isbidaallada gurmadka degdega ah ee ku yaal gobolka waxuuna leeyahay qeyb raajo oo ah mid ka mid ah kuwa Iswiidhan ugu casriyeeysan.
Xarumah dabiibida ilkaha ee gobolka iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxeey meelo badan oo kala duwan uga yaallaan degmada.
Bogga internetka ee gobolka Gävleborg waxaad ka heleysaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan rugaga caafimaadka, isbitaallada, dhakhtarka ilkaha iyo farmashiiye.
Caawimaad loogu tala galay carruurta iyo dhalinyarada.
BRIS xuquuqda carruurta ee mujtamaca, taleefanka 116 111 waxaa wici kartaa haddii aad ka yartahay 18 sano aadna rabtid inaad la hadashid kalkaaliye aad kala xaajootid waxyaabaha aad ka fakareyso ama haddii aad caawimaad u baahantahay ( waana bilaash).
Qofka weyn oo raba inuu hadlo carruurtiisa, waxuu wici karaa 0771505050 si uu ula hadlo kalkaaliso kalana hadlo waxa uu rabo in laga caawiyo. ( waa lacag la'aan).
Kufsiga dumarka - jaaliyada Kvinnojouren Vändpunkten: dhibaatadaa iyo waxa kusoo qabsaday maahan wax yar ama waxa maalaa yacni ah.
Jirdil qoyska dhexdiisa ah. Xafiiska adeega vulshada waxuu hayaa hawlo caafimaad oo dumarka loogu tala galay. Noo kaalay!
Leenka taleefinaka ee haweenka waxaa loogu tala galay dumarka loo geysto hanjabaad, kufsi ama faraxumeyn.
Haddii aadan ku hadleyn ama aadan fahmeyn luqadda iswiidhishka waxaad xaq u leedahay inaad qabsatid turjumaan marka aad la kulmeysid xafiisyada.
Xiriirada gaadiid ee degmada weey fiicanyihiin, tareen iyo basaska safarada dheer galaba (Xtrafik, SJ, Y-buss iyo Härjedalingen).
Tikadada weey u jabanyihiin ardayda. Ka dalbo kaarkaada ardaynimada halkan.
Ma u baahantahay ogolaansho ama u fasixid inaad bilowdo shirkad? Faafaahin dheeraad ah ka akhriso bogga degmada ama booqo HNA. Hey'adda kobcinta dhaqaalaha waxeey ku siineysaa warbixin ku saabsan ogolaanshaha leesaga baahanyahay waxyaabaha kala duwan. Faafaahin dheeraad ah ka akhriso Business Sweden ama bogga internetka ee Work in Sweden.
Halkaan waxaa kusoo uruurinay leeman kugu xiraro arjiyo shaqooyin ka bannaan shaqa bixiyayaasha gobolka Gävle:
Bogga degmada, bogga xafiiska shaqada ama Blocket.
Avdelningsledare Home Elgiganten Hudiksvall Avdelningschef, butik
Sjuksköterska till dialysmottagningen i Hudiksvall Sjuksköterska, grundutbildad
Försäljare med eller utan erfarenhet i Hudviksvall. Fast lön + provision. Hemförsäljare
Säljare Kök Hudiksvall Butikssäljare, fackhandel
Green Cleaning söker säljande Arbetsledare Arbetsledare, städ/Städledare
Servicetekniker till Hudiksvall Servicetekniker, elektronik
Besiktningsman och inmätare för fönsterbyte Träarbetare/Snickare
Butikssäljare Hudiksvall vikariat Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Bussförare Hudiksvall Bussförare/Busschaufför
Kock , 1 plats Kock, storhushåll
Sjuksköterska sökes till HIA i Hudiksvall Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska sökes till medicinavdelningen i Hudiksvall Sjuksköterska, grundutbildad
Barnmorska sökes till Hudiksvalls sjukhus Barnmorska, förlossning
IVA - sjusköterskor sökes till Hudiksvall Intensivvårdssjuksköterska
Operationssjuksköterska sökes till Hudiksvall Operationssjuksköterska
Psykiatrisjuksköterska sökes till Hudiksvall Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Ögonsjuksköterska sökes till Hudiksval Ögonsjuksköterska/Oftamologassistent
Sjuksköterska sökes till akuten i Hudiksvall Sjuksköterska, grundutbildad
Dialyssjuksköterskor sökes till mottagning i Hudiksvall Sjuksköterska, grundutbildad
Distriktssköterska sökes till Iggesund hälsocentral Distriktssköterska
2 745 km2
Göteborg 641 km
Malmö 905 km